Realme က အိန္ဒိယ မှာ C30, Preview ကို TechLife စောင့်ကြည့် ရေး R100 – Pandaily
Realme က အိန္ဒိယ မှာ C30, Preview ကို TechLife စောင့်ကြည့် ရေး R100
Jun 20, 2022, 20:45ညနေ 2022/06/20 23:17:04 Pandaily
တရုတ် စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူအိန္ဒိယ မှာ C30 စမတ်ဖုန်း မိတ်ဆက် လိုက်တဲ့ realmeတနင်္လာနေ့ ။ ဒါ့အပြင် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက် မယ့် စမတ် နာရီ အသစ် ဖြစ်တဲ့ realme TechLife watch R100 ကိုလည်း ကုမ္ပဏီက ကြိုတင် ကြည့်ရှု ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ နာရီ ဟာ ကျန်းမာ ရေးနဲ့ ကြံ့ခိုင် ရေးကို နှစ်သက် သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖက်ရှင် ကျပြီး ကြာရှည် ခံ တဲ့ နာရီ ကို တောင့်တ နေပါတယ်။
Realme TechLife Watch R100 တွင် ၁. ၃၂ လက်မ 360×360 pixel resolution TFT အရောင် မျက်နှာပြင် ရှိပြီး အလူမီနီယမ် အလွိုင်း နှင့် matte နောက်ကျော အဖုံး ပါရှိသည်။ R100 ရဲ႕ ညာ ဘက္ျခမ္း မွာ Watch S နဲ႔ Watch S Pro ၾကား ႏုိင္မယ့္ ခလု တ္ ႏွစ္ခု လည္း ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။ TechLife Watch R100 မွာ Bluetooth ဖုန္း ေခၚဆို မႈ အတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ ေပးထားၿပီး 380 mAh ဘက္ထရီ ကို ထည့္သြင္း ေပးထားပါတယ္။
Realme ကလည္း ဒီႏွစ္မွာ တရုတ္ မွာ Watch T1 စမတ္ နာရီ ကို မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ နာရီ ဟာ 50Hz High Refresh Rate, 110 Sport Mode, Bluetooth Calling, Fast Charge, Multi-functional NFC နဲ့ အခြား လုပ်ဆောင်ချက် များကိုထောက်ပံ့ တဲ့ ၁. ၃ လက်မ ပတ်ပတ်လည် ဖုန်းခေါ်ဆို မှုတစ်ခု တပ်ဆင် ထားပြီး ၆ ၉၉ ယွမ် (ဒေါ်လာ ၁၀၅) နဲ့ ရောင်းချ ပါတယ်။
T1 ကို ၾကည့္ ရန္ (ဓာတ္ပံု-realme)
ဒီေန႔ ထြက္ရွိ ခဲ့တဲ့ realme C30 မွာ UniSoC T612 chip ကို အသံုးျပဳ ထားၿပီး Android 11 အေျချပဳ realme Go Edition UI ကို အသံုးျပဳ ထားပါတယ္။ စမတ္ဖုန္း ရဲ႕ ေနာက္ ေက်ာ ဘက္မွာ 8MP Camera နဲ႔ အေရွ႕ ဘက္မွာ 5MP Selfie Camera တပ္ဆင္ ထားပါတယ္။ 5000mAh Battery ကို တပ္ဆင္ ထား ျပီးေတာ့ 5% က်န္ ေနေသး ရင္ေတာင္ Super-Saving Mode မွာ ၄၃. ၅ ရက္အထိ ခံ ႏိုင္ပါတယ္။
Realme C30 (ဓာတ်ပုံ-realme)
Realme C30 မွာ ၆. ၅ လက္မ HD + LCD screen ျဖစ္ၿပီး 1600 × 720 resolution နဲ႔ HZ touch sampling rate 120Hz နဲ႔ max brightness 400 nits ျဖစ္ပါတယ္။ အထူ ၈. ၅ မီလီမီတာ သာ ရှိပြီး အလေးချိန် ၁၈၂ ဂရမ် သာ ရှိတဲ့ ဒီ စမတ်ဖုန်း မှာ ဝါး စိမ်း ရောင် နဲ့ အိုင် ပြာ ရောင် အရောင် နှစ်မျိုး ရရှိ နိုင်ပါတယ်။2+ 32GB ဗား ရွင္း ကို ႐ူ ပီး ၇၄ ၉၉ (ေဒၚလာ ၉၅ ဒသမ ၉၉) နဲ႔3+ 32GB ဗား ရွင္း ကို ႐ူ ပီး ၈၂ ၉၉ (ေဒၚလာ ၁၀၆) သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Realme GT2 Master စမတ်ဖုန်း ရဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေ မိတ်ဆက်
အိႏိၵယ ႏိုင္ငံတြင္ Realme ၏ ပထမဆံုး ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ အထင္ကရ စတိုး ဆိုင္ ကို ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ မည္
တရုတ် စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ realme က အိန္ဒိယ တွင်ပထမဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အထင်ကရ စတိုးဆိုင် ကို တရားဝင် စမ်းသပ် စစ်ဆေး ခဲ့သည်ဟု ကြာသပတေး နေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ အထင္ကရ စတိုး ဆိုင္ ကို ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း realme India ၏ တြစ္တာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Gadgets May 27 မေ 29, 2022
Realme ကို GT Masters Version, Qualcomm Xiao Dragon 870 chip အသုံးပြုထားပြီး Master Version ကတော့ Adventure
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ တရုတ်စမတ်ဖုန်း ရောင်းချသူ Realme ဟာ Realme GT Master ဗားရှင်းနဲ့ Master Exploration ဗားရှင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Gadgets Jul 21 ဇူလိုင် 21, 2021
Realme သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူနစ် သန်း ၆၀ ကျော် ရောင်းချ ခဲ့ပြီး GT2 စီးရီး ကို ဖြန့်ချိ ခဲ့သည်
တရုတ် စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ် realme ဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ထုတ် GT2 စီးရီး စမတ်ဖုန်း တွေ ဖြစ်တဲ့ Dragon Ball ရဲ့ စိတ်ကြိုက် GT Neo2နဲ့ realme ရဲ့ စာအုပ် အသစ် ရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက် ဗားရှင်း တွေကို အင်္ဂါနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
Gadgets Jan 04 ဇန်နဝါရီ 7, 2022